Col Gabre oo loo dalacsiiyay Xafiiska laga maamulo IGAD+ Akhriso Wareegtada lagu magacabaay. – Hornafrik Media Network
Col Gabre oo loo dalacsiiyay Xafiiska laga maamulo IGAD+ Akhriso Wareegtada lagu magacabaay.
By HornAfrik	 Last updated Jun 17, 2017
Col. Gabre Egziaber ayaa xil cusub looga magacaabay Urur Goboleedka IGAD, kaddib markii laga badalay Xafiiska Fududeynta arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta IGAD u qaabilsan Soomaaliya, isla markaana la baabi’iyay qandaraaskiisa.
Warqad qoraal ah oo ka soo baxay Xoghayaha Guud ee Urur Goboleedka IGAD Maxbuud Macalin ayaa Col. Gabre waxaa loogu magacaabay La Taliye sare ee arrimaha Siyaasadda ee Xoghayaha Guud ee IGAD.
Qoraalkan oo ay heshay hornafrik.net, isla markaana xaqiijin ku sameysay, ayaa waxaa uu Col. Garbe hayn doonaa xilka La Taliyenimada muddo 12 bilood, oo ka bilaabaneysa, 12 June 2017, kuna eg 11 June 2018.
Sidoo kale waxaa warqada ku cad mushaarka uu qaadanayo oo noqon doonta $7015.63 (Todobo kun iyo shan iyo toban dhibic lixdan iyo saddex oo dollar)
Col. Gabre ayaa xilligii uu ka tirsanaa Xafiiska Fududeynta arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya waxaa uu mushaarkiisa ahaa lacag dhan Shan kun oo dollar, balse haatan mushaarkiisa waxa uu dalacay in ka badan 2,000 Dollar.
Soomaaliya oo xubin ka ah urur goboleedka IGAD ayaa wax laga ogeysiiyo magacaabista Gabre. Waxaana waajib ah in marka qof xil looga magacaabayo Xafiiska Xoghayaha Guud ee IGAD oo fadhigiisu yahay magaalada Jabuuti in la ogaysiiyo Dhamaan Dalalka Xubnaha ka ah Urur Gobaleedka IGAD.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxay Warbaahinta qaarkood qoraysay in Col Gabre laga eryay Shaqadii uu IGAD uga hayay Somalia, kadib markii ay sidaas dalbatay Dawladda Somalia. Hase yeeshee Qoraalkan ayaa cadaynaya in Gabre la dalacsiiyay oo hadda wixii ka dambeeya uu ka shaqayn doono Xafiiska Xoghayaha Guud ee IGAD.
Halkan hoose ka akhriso warqada magacaabista Col. Gabre: